Imaaraatka Carabta oo ciidamadii u horeeyey u tababar dowladda faderaalka (sawiro) – Radio Daljir
Imaaraatka Carabta oo ciidamadii u horeeyey u tababar dowladda faderaalka (sawiro)
Noofember 1, 2017 4:43 g 0
Dowladda Imaaraatka Carabta ayaa ku wareejisay dowladda faderaalka ee Soomaaliya 311- askari oo ay ku tababartay xero ciidan oo ay ku leedahay magaalada Muqdisho.
Ciidamadan ayaa maanta si rasmi ah loogu wareejiyay taliyaha ciidamada militariga ee dowladda faderaalka Soomaaliya Jen. C/wali Jaamac Gorod, kadib munaasabad ay ka qaybgaleen raysal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo safiirka Imaaraatka Carabta ee Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Raysal wasaare Xasan Cali Khayre oo ka hadlay ciidamadan oo ay dowladda Imaaraatka Carabta u dhamaystirtay gaadiidkooda dagaalka iyo agabka ciidan ayaa sheegay inay ka qaybgali doonaan dagaalka dowladda ay ku dhawaaqday ee Al-shabaab looga saarayo deegaamada ay ku suganyihiin.
Waxaa uu u mahadceliyay dowladda Imaaraatka Carabta oo ciidamadan tababarka iyo qalabka dagaal siisay.
Imaaraatka Carabta ayaa ka mid ah dowladaha ka caawiya Soomaaliya dhanka ciidamada, waxaana horay tababaro ciidamo uu uga sameeyey deegaamada Puntland.